Thola Usizo Ukuqamba Igama Lebhizinisi Lakho nge-Squadhelp | Martech Zone
Ufuna ukuzwa indaba eyethusayo yokubeka uphawu? Inkampani yakho ihlela ukwethulwa kwayo futhi ifake imali engu- $ 150,000 kusizinda, igama, nokwethulwa… kuphela ukuze konke kuphele uma ufunda ukuthi i-FBI inophenyo lwegama elifanayo eliya emphakathini ... 3VE.
Akukona ukuthi i- [Agency okwamanje engenagama] ibingenza noma yini ukubikezela lolo hlobo lwenkinga. Kuyangimangaza ngempela ukuthi inani lezinkampani ezingenzi umzamo omkhulu wokuzibiza ngamagama. Ngazi amabhizinisi ambalwa asebenzise ithani lemali kuma-ejensi wokubeka uphawu, kuphela ukuthola ukuthi igama lawo linezincazelo ezifanayo emhlabeni wonke, noma nakwezinye izimboni.
Enye inkampani engangisebenza nayo yangiqasha ukuze ngithole usizo lokusesha ngezinto eziphilayo. Inkinga enganginayo ngokushesha ukuthi umkhiqizo wabo wawufana nesitolo esivele sikhona online kwenye imboni. Ngenxa yalokho, kwaba nokudideka ngokushesha ukuthi abantu abakwazanga ukubathola ku-inthanethi… noma ngabe bathayipha igama lebhizinisi labo kwimiphumela yosesho.
Enye inkampani engiyisizile ibingenza usesho olulula kuGoogle ukuthola ukuthi igama labo lisondele kakhulu kulelo sayithi elingalungile. Basaletha amathemba amasha angajabuli kangako ngokuthi abasebenzi babo bathayiphe i-URL engalungile.
I-squadhelp kuyimakethe lapho ungathola khona usizo lokuqamba ibhizinisi lakho, ukuthola igama lesizinda elitholakalayo, futhi uthole usizo lokuthuthukisa i-logo yakho. Babhale i-ebook enhle ekudonsela ezinyathelweni eziyi-8 zokuqamba ibhizinisi lakho:
Iyini injongo yebhizinisi lakho?
Obani abalaleli abazosebenzelwa yibhizinisi lakho?
Yini okuhlukile ngebhizinisi lakho? Buyini ubuntu bakho?
Thola usizo kolunye ubuciko (lowo ngumsebenzi wabo) ukucabanga ngegama.
Phonsa amagama angenangqondo.
Hlaziya izilimi ukuqinisekisa ukuthi igama lakho alidideki noma alifaneleki kwezinye izilimi.
Gwema ukumangalelwa ngezinkinga zophawu lwentengiso.
Kuqinisekise ngaphambi kokuthi ube bukhoma!
I-squadhelp unomphakathi wabasunguli abakusiza ukuthi uze namagama ebhizinisi ahlukile. Inqubo iqonde ngqo:
Qala umncintiswano wakho - Qedela ithempulethi yabo esheshayo, elula yephrojekthi, futhi bazoyabelana nomphakathi wethu wabadali abangaphezu kwama-70,000.
Imibono iqala ukungena ngaphakathi - Uzoqala ukuthola imibono yamagama - eyenzelwe wena ngqo - kungakapheli imizuzu. Abaqhudelani abaningi bakusebenzela ngasikhathi sinye! Umncintiswano ojwayelekile wokuqanjwa kwamagama uthola imibono yamakhulu ambalwa. Yonke imibono ihlolwe ngokuzenzakalela ukutholakala kwe-URL.
Bambisana futhi Uxhumane - Bona konke okuthumele kusuka kudeshibhodi yakho yomncintiswano. Linganisa okufakiwe, shiya imibono yangasese, bese uthumela imilayezo yomphakathi, uhole inqubo ibheke egameni eliphelele.
Qinisekisa - Khetha igama lakho ngokuzethemba. Inqubo yethu yokuqinisekisa eyingqayizivele ifaka phakathi ukuhlolwa kwesizinda, ukuhlolwa kwengozi yophawu lwentengiso, ukuhlaziywa kwezilimi, nokuhlolwa kwezithameli ngobungcweti.
Khetha owinile! - Lapho umncintiswano wakho usuphelile, memezela onqobile - bese ubhalisa igama. Ungabuyela ku-Squadhelp ukuze uvule iphrojekthi ye-Logo Design noma ye-Tagline yegama lakho.
Qalisa umncintiswano wokuqamba igama Bheka Indawo Yabo Yemakethe
Ukudalula: Ngisebenzisa eyethu izixhumanisi ezihambisanayo ye-Squadhelp kulokhu okuthunyelwe.
Tags: ukufaka uphawu lwebhizinisi lakhoukuqamba ibhizinisi lakho